Vatokely, famantaranandro marani-tsaina izay mifandray amin'ny findainao finday | Androidsis
Vatokely amin'ny loko isan-karazany
Ny vokatra hatolotro anao eto ambany, Pebble, dia fahombiazana eo amin'ny tontolon'ny teknolojia sy ny fifandraisana amin'ny finday, ankoatry ny maha tetik'asa notanterahina noho ny fanohanan'ny mihoatra ny Olona 70.000, izany miaraka amin'ny vola nomen'izy ireo vola amin'ny alàlan'ny tranonkala kickstarter.com, nahatonga ny nofinofy mpamorona sy mpamorona azy, Eric Migicovsky.
Eric Migicovsky, aingam-panahy avy amin'ny Sony Smartwatch, dia namorona vokatra mitovy amin'izany fa miaraka amin'i fanatsarana tsy manam-petra sy endrika teknika, maro no miantso azy hoe Mpijirika Smartwach, fa ny marina dia miaraka amin'ny fanohanan'ny mihoatra ny Olona 70.000 ary a famatsiam-bola avo folo heny noho ny kasaina ho azo, dia nampianatra lesona antsika rehetra amin'ny fanatanterahana ny nofinofiny sy ny fanatanterahana ny tetikasany.
1 Inona ny vatokely?
2 Toetra teknika vatokely
3 Fampiharana miavaka
4 Aiza no hividianana azy?
Inona ny vatokely?
Pebble dia famantaranandro marani-tsaina afaka mifandray amin'ny antsika izany finday avo lenta miaraka amin'ny rafitra fandidiana Android, ankoatry ny mifanentana amin'ny rafitra fiasa finday an'ny jeneraly lehibe Cupertino, ny iOS do iPhone, iPad e iPod Touch.
Ny famantaranandro dia mifandray amin'ny fitaovana, mampiasa fifandraisana Bluetooth, ary amin'ity fomba ity dia mampahafantatra anay feno momba ny fampandrenesana voaray, mailaka, SMS, antso an-tariby sns, sns ...
Tsy zava-baovao izany, mety mieritreritra ianao fa efa misy tetik'asa efa vita sy vita tanteraka, toa ilay efa voalaza teo Sony Smartwatch, na ilay mijery aho fa efa nivoaka taloha kelin'izay ary manana ny voninahitra maha-izy azy famantaranandro voalohany eran-tany.
Marina fa marina ny lazainao, saingy vatokilonjy, te handroso lavitra, satria misy ny tetikasany ny famoahana ny SDK hamporisihana ny famoronana fampiharana mazava ho an'ity fitaovana ity, amin'ny fampanantenany ho revolisiona ao amin'ity sehatra ity.
Toetra teknika vatokely
Kisary LCD Memory x x 144 x 168.
Speedometer axis telo miaraka amin'ny mpamantatra fihetsika.
Bluetooth 2.1 + EDR sy 4.0 (Angovo ambany)
Famoronana kanto sy fanatanjahan-tena.
Trano misy amin'ny loko isan-karazany.
Araka ny loharanom-baovao samihafa, raha te hifandray amin'ity sensational ity sy famantaranandro marani-tsaina revolisionera, tsy mila misintona rindrambaiko noforonina ho an'ity tanjona antsoina fotsiny ity isika vatokilonjy, saingy heveriko fa na mbola tsy misy io, na tsy maintsy sintomina mivantana avy ao amin'ny tranonkalan'ny vatokilonjy, satria, na eo aza ny ezaka nataoko rehetra dia tsy vitako ny nanatratra azy.
Famaritana ho an'ny inona vatokilonjy miasa miaraka amin'ny finday avo lenta, dia voafetra ihany raha, raha mpampiasa ianao Android, manana ny kinova an'ny firmware 2.3 Gingerbread na avo kokoa, raha toa ka mpampiasa ianao iPhone, iPad o iPod Touch, havaozina ho iOS5.
Efa misy ity famantaranandro marani-tsaina ity fampiharana fanatanjahan-tena manokana, fampiharana izay miasa toy ny speedometers na pedometers, izay napetraka ao amin'ny anay finday avo lenta Avelany hanana data marina eo noho eo izahay, toy ny dia lavitra, fotoana lany, may ny kaloria ary tahirin-kevitra mahaliana maro hafa.
Izy io koa dia misy fanaraha-maso mozika, hifehezana tanteraka ny playback an'ny mpilalao mozika an'ny Android nefa tsy mila esorinao eny am-paosinao, kitapo, na aiza na aiza misy anao.
Aiza no hividianana azy?
Hividy an'ity vokatra revolisionera ity, mila mandeha any amin'ny tranonkalany fotsiny izahayary ampidiro ny lisitra fiandrasana, satria ny vokatra dia tsy misy tahiry vetivety aorian'ny fivarotana mihoatra ny 85.00 unidades, ary ilay fahombiazana ananany dia tsy isalasalana fa mahagaga. Ny vidin'ity famataranandro ity, raha ny angona azo avy amin'ny tranokalany, manodidina ny 150 Dolara amerikana, izay tokony ampiantsika 10 o 15 dolara bebe kokoa raha manafatra avy any ivelan'i Etazonia izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Pebble, ny ho avy dia mitoetra eo an-tananao
natxo dia hoy izy:
Ny famatsiam-bola azo dia avo mihoatra ny 100 heny noho izay nokasaina hatao fa tsy 10 araka ny voalazan'ny lahatsoratra.
Vokatra tena tsara amin'ny fijery tena tsara.
Mamaly an'i Natxo
HTC Ville C vaovao, kinova ekonomika an'ny One S